Real Madrid oo Eriday Tababaraheedii iyagoo Tababare Cusub u Magacowday Zinedine Zidane
Kooxda kubada cagta ee Real Madrid ee dalka Spain, ayaa waxa ay eryeen tababarahoodii Rafa Benitez. Real Madrid ayaa haatan kaalinta saddexaad kaga jirta kala horreynta shaxda horyaalka Spain ee La Liga, waxa ayna ka hoosaysaa kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid oo kow iyo laba ku kala jira. Benitez, oo kooxdaasi maamulayay todoba bilood oo kaliya ayaa waxaa saarnaa...
Kooxda Arsenal Oo Guul Ku Bilawday Sanaka Cusub Ee Horyalka Premier League’
Kooxda Arsenal ayaa guul ku bilawday hogaanka Premier League kadib markii ay ka badisay kooxda Newcast United oo marti ugu ahayd garoonkeeda Emirate Stadium, waxayna ku bilaabatay sanadkan cusub guul. Arsenal ayaa haatan ku jirta wadadii ay ku soo afjari lahayd abaarta ka haysata koobab la’aanta iyadoo sanadkan qaab ciyaareed wanaagsan la soo shir tagtay. Qeybtii hore...
Kooxda Gadiidka iyo Kooxda Saxafi Oo Galabta Ku wada Balansan Garoonka Banadir Ee Magalada Muqdisho;
Waxaa garoonka Banaadir ee Magaaladda Muqdisho ku wada Balansan Galabta kooxaha Gaadiidka iyo Saxafi, labada koox ayaa ka mid ah kooxaha 10-ka ah ee ka qeyb qaadanayo horyaalka kubbadda cagta Soomaaliya. Gaadiidka, ayaa isbeddel badan waxa ay ku sameysay Ciyartooyda, waxanna kooxda xiddigihii ka tagay laga xusi karaa Mheso Lehmann, oo ku biiray kooxda Horseed, inkastoo...
Kooxda Horseed iyo Kooxda Jeenyo oo Ku Kala Baxay 1-1Ciyaar Shalay Galab dhaxmartay’
Kaddib kulan xiiso leh oo ka dhacay garoonka Banaadir, ayaa waxaa min hal dhibic ka helay kooxaha Jeenyo iyo Horseed oo ka ah xilli ciyaareedkan kuwa ugu adag horyaalka kubbadda cagta Soomaaliya. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxaa natiijadda ku hoggaaminayay 1-0 naadiga ciidanka xoogga dalka ee Horseed, waxaanna goolka u dhalliyay xiddiga Ayuub kaas oo ka mid ah ciyaartooyda...
Kulanka Adag EeHoryalka Kubada Cagta Soomaaliya’Oo Dhaxmari Doono Galabta Horseed iyo Jeenyo
Waxaa Galabta la baasan doonnaa saacaddu marka ay soo gaarto 3:30 galabnimo waqtiga geeska Afrika’ kulanka u dhaxeeyo Horseed iyo Jeenyo’ waxanna uu ka dhici doonnaa garoonka Banaadir ee magaaladda Muqdisho. Horseed, ayaa wax la yaab leh ka sameeysay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay kubbadda cagta Soomaaliya. waxanna ay kala hannatay koobka koobabka Jen....
Louis Van Gaal Oo Diiday In uu Is Casilo iyo Dagerayasha Man’United Oo Dalbaday Jose Mourinho’
Tababaraha kooxda Manchester United, Louis van Gaal, ayaa sheegay in uusan is casilaynin kaddib markii ay kooxdiisu barbaro eber iyo eber ah la gashay Chelsea isniintii. Kooxda United ayaa sideed ciyaarood oo isku xigta ku guul daraysatay in ay badiso marka la eego koobabka xili ciyaareedkan ay ka dheeshay oo dhan, waana markii u horaysay ee ay tan oo kale dhacdo tan iyo...
Kooxda Heegan Oo Guldaro Ku Bilawday Horyalka Kubada Cagta Ee Soomaaliya’
Waxaa shalay gellinkii dambe magaaladda Muqdisho’ si rasmi ah uga furmay horyaalka kubbadda cagta Soomaaliya ee xilli ciyaareedka 2015/2016” waxaanna lagu dheellay garoonka Banaadir ee Magaaladda Muqdisho. Kulankii ugu horeeyay ayaa waxaa isaga horyimid naadiyada Dekadda iyo Heegan, labada dhinac ayaa muujiyay kubbadd aad u wanaagsan, qeybta hore ayaa waxa...
Jamie Carragher Oo Amaanay Qaabciyaaredka Kooxda Arsenal Waana Qadi Karta’ Premier League’
Hiiraan Xog Gunners waxa ay iminka kaalinta labaad uga jirtaa horyaalka, laba dhibcood ayey u jirtaa Leicester City oo hor-boodeysa Liverpool Jamie Carragher waxa uu aad u doonayaa in Arsenal ay ku guuleysato Premier League xilli ciyaareedkan. Dhinaca Arsene Wenger ayaa ugu cad cad in ay saqafka sare ku dhameysan doonaan bisha May kaddib markii ay 2-1 uga badiyeen Manchester...
Kooxda Horseed oo Afka ciidda u dartay kooxda heegan
Kooxda Kubadda Cagta ee Horseed oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee Somalia ayaa maanta ka adkaatay kooxda Heegan oo iyaduna horyaalka dalka ka mid ah, waxayna uga adkaaday gool-ku-laadyo ama rigoorayaal. Hoseed iyo Heegan ayaa ku tartamayay Super-Cup-ka Somalia, kaasoo ay sanad walba loo dhigo labada koox ee ku kala guuleysta koobka Jeneraal Daa’uud iyo kooxaha hoyraalka...
Kooxda Arsenal Oo Qorsheyneyso In Ay Amaah Ku Bixiso Calum Chambers
Wararka ka imaanaya gudaha ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda Arsenal ay ku fikirayso inay dib ugu celiso Southampton daafaca reer ingiriis ee Calum Chambers. Calum Chambers ayaa ka soo dhaqaaqay kooxda Southampton xagaagii 2014 wuxuuna ku soo biiray Arsenal balse 20 jirkaan ayaa ku guul daraystay inuu boos joogto ah ka helo Gunnrs. Hiiraan Metro ayaa shaac ka qaaday...